Nooca gadhka sida uu yahay wejigaaga, sidee u xiirtaa? | Ragga Stylish
Paco Maria Garcia | | La xiiray, nololeedka
Waxaan dhowaan la kulanay dhalashada gadhka sida dharka wajiga. Ku dhowaad qof walbaa wuxuu gashadaa noocyo kala duwan, cawl, jajab…, Iwm Waxa la ogaan karo waa nooca gadhka noogu habboon ee nooceena ah, dhammaantood ma hagaajiyaan muuqaalkeenna.
Gadhka waxaan ku sixi karnaa waxyaabo badan, laga bilaabo ove of our face, si loo gaaro weji leh isafgarad weyn. Kaliya waa inaad go'aamisaa qaabka dhicitaankaaga oo aad doorataa garka jar ee kugu habboon adiga.
Sida gadhka loo beero
1 Garka noocee ah ayaa ku haboon wajigaaga?
2 Wajiyada dhaadheer
3 Wejiyada laba jibbaaran
4 Wejiyada wareega
5 Wajiga Oval
6 Weji saddex gees leh
7 Dheeman dheeman
8 Haddii aad laba garka leedahay ...
Garka noocee ah ayaa ku haboon wajigaaga?
Way badan yihiin sababaha gadhka loo xiro. Sababtoo ah waxay ka mid tahay isbeddellada ugu dambeeyay, sababtoo ah waxaan raacnaa tusaalaha qof caan ah, maxaa yeelay way noo fadhidaa, iwm. Laakiin gadhkee kee midka ugu habboon annaga oo ku saleysan nooca wejiga aan leenahay?
Gadhku waa loo tixgeliyey mid ka mid ah qalabka ugu qurxinta badan ragga. Garka noocyada oo dhan waa la arkaa. Xitaa gadhkaan kaladuwan ayaa isbadal ku sameeyay qeybta wax soo saarka daryeelka: burushyada, waxsoosaadka bixiya qaabka la rabo, looshinnada si loo waraabiyo gadhka, burushyo saameyn dhalaalaya leh iwm
Wajiyada dhaadheer ayaa ka mid ah kuwa ugu jilicsan ee gadhka u baxa. Waa lagama maarmaan in laga fogaado in wajiga uu leeyahay saameyn sii dheereyn badan weli. Nooca gadhka ay tahay in loo adeegsado kiisaskan ayaa ah kan gadh gaagaaban oo leh dhinacyo dhumuc leh. Sidan oo kale, wejigu wuxuu u muuqan doonaa mid dhererkiisu yar yahay oo qaab muuqaalkiisu u eg yahay.
Furaha ayaa ku jira sameyso nooc bisha ka mid ah wajiga, taas oo jilcisa saamaynta wajiga dheer.
Hadaad leedahay waji dheer doortaa inuu si aad u fiican u gooyo iyo in weligaa ha arkin daanka hoostiisa, tani waxay sababi doontaa in wajigaagu sii dheeraado xitaa. Gadhkaagu waa inuu ku gaabnaadaa aagga gadhka isla markaana ka sii ballaadhaa meelaha guban si ay u sameeyaan bilaha bisha oo wejiga ka dhigaya inaanu u muuqan inuu sii dheeraanayo.
Tani waa kiiska jilayaasha sida George Clooney ama Brad Pitt oo, wejiga noocan ah, gadhka u janjeedha sidan.
Wejiyada laba jibbaaran
Wajiyada laba jibbaaran waxaa lagu gartaa food ballaadhan, dhabannada sare, iyo garka oo aan wax badani ku dhegin. Ilka gowgu had iyo jeer waa ikhtiyaarka ugu fiican sidaa darteed wejigu wuu sii dheereynayaa oo saamayn casri ah leh.
Sidee waaye noqo ari? Iyadoo timo badan oo ku saabsan aagga garka iyo in yar oo ka yar dhinacyadas. Xitaa dhinacyada waa la wada xiiri karaa.
Burooyinkan si fudud ayaa loo dayactiraaAdoo adeegsanaya mishiin koronto oo fudud, xitaa uma baahnid inaad xiirto si aad u hesho muuqaalkaaga ugu fiican.
El weji laba jibbaaran waa mid ka mid ah kuwa ugu badan. Badanaa waxay la xiriirtaa wejiga ballaaran, dhabannada dhawaaqa leh iyo garka oo aan aad u dheereyn laakiin si fiican loo qeexay. Gadhka riyaha ayaa ku habboon wajiga noocan ah, dhererka garka si aaggan uu u noqdo barta ugu weyn ee dareenka. Ha iloobin inaad garka ka gooyso dhinacyada oo leh qaab wareegsan si aad u jilciso dusha wajiga.
Un Wejiga wareega Waxaa lagu gartaa iyada oo leh dhabanno caan ah oo aad u yar iyo dhabanno barar. Waxaa lagugula talinayaa inaad xirato garka xagasha badan oo qarinaya wajiga wareega, kana dhigaya mid dheer. Iska yaree dhererka dhabannada.
ka dhabannada iyo dhabannada buuran iyo garka yar dhalin dareen ah in wajiga ayaa ka gaabnaa. Waa muhiim, wajiga noocan ah, inuu gadhku xagal laaban yahay, qeexaa daanka in yar oo dheeraad ah oo abuuraya dareen dheerida wejiga. Hadday sidoo kale jirto garka labajibaaran, tan ugu guusha badan ayaa ah in timaha ay ka soo baxaan garka hoostiisa, dhanka qoorta.
Hadday tahay wejigu waa nooc oval ah, astaamaha ugu muhiimsan waa in qaababka la soo koobay. Wejigani waa kan ugu wanaagsan ee xajiya dheellitirka u dhexeeya dhabannada, garka iyo foodda. Waxaa loo arkaa wejiga ugu fiican.
Qaabkan wajiga ah, garka had iyo jeer waxay u muuqdaan kuwo si fiican u habboon. Waxay u badan tahay inay tahay riyaha sida ugu fiican isku dhex gala, iyo gadh aan aad u calaamadeysnayn wajiga intiisa kale.
Waxaa macquul ah in dareenka joogsiga wejiga oo aad u wareegsan Waxaa qayb ahaan qariyey gadhka.
Wajiyadan, oo leh hooska xusuusta saddexagal, waxaa lagu gartaa astaamo calaamadeysan iyo garka oo aad u dheereeya.
Wejiga noocan ah, nooca gadhka ee sida ugu habboon ugu habboon ayaa ah garka oo dhan, kaas oo kaa caawin doona inaad qarinayso dareenka adkaanta xoogaa calaamadeeya wejiyadan.
Gadhka wuu ka kori karaa dhinacyada dhinacyada wax yarna wuu ka gaabin karaa aagga garka, lid ku ah wixii ku dhacay tusaalooyinkii hore.
Xaaladahaas waa Waxaa lagugula talinayaa in gadhka aad loo ilaaliyo, si loogu calaamadeeyo wejiga oo uusan uga dhaafin garka. Qaabka "gadh-dhawr maalmood ah" ayaa laga yaabaa inuu noqdo kan ugu habboon.
Mararka qaar, wajiga dheemanku wuxuu ku wareersan yahay saddexagal iyo laba jibbaaran. Xaqiiqdii, haddii aan si dhow u eegno, way ku kala duwan tahay iyadoo ka ballaadhan aagga dhabanka marka loo eego xagga sare ee madaxa ama garka.
Garka ugu fiican ee noocan ah wajiga badanaa waa riyaha oo leh saameyn faruur-abuur ah. Waxa kale oo jira ikhtiyaar ah in la xidho shaarib iyo gadhka, oo ka hooseeya bushimaha hoose. Muuqaalkan waxaa caan ka dhigay Johny Deep.
Haddii aad laba garka leedahay ...
Kuwa leh laba garka kan ugu fiican ayaa ah gadh buuxa, kaas oo sifayn doona wejiga guud ahaan isla markaana daboolaya garka laba jeer laftiisa. Garka ka dhig mid geesi ah, oo ku dhammaanaya midigta khadka garka adigoon qoorta dhaafin.
Laakiin sidoo kale waa muhiim, Haddii aadan jeclayn xirashada gadhka, hubi bararkaaga dhinaca. Haddii wejigaagu khafiif yahay, dooro macbudka gaagaaban, haddii uu buuran yahay, ka tag macbudka waxoogaa ka dheer si aad u sawirto khadka daanka.
Tilmaamahan ayaa ku caawin kara isbeddel muuqaal ah
Hada waa inaad adiga kaliya doorataa, gadhka haa mise maya?
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Nooca gadhka sida ay tahay wejigaaga
Waxaan leeyahay gadh aan sinnayn, gadhkayguna kama xidho U. U. Aadna waan ugu faraxsanaan lahaa gadhka fargeeto faransiiska
Jawaab Ricardo "DjGomita" García Paredes
Hagaag, waxaan isku dayay ku dhowaad dhammaan kuwa liiska kujira marka laga reebo hulihee xD, nasiib daro waxaan helaa gadh badan iyo timo yar oo madaxayga ah.
Hugh Jackgman iyo Justin Timberlake waxay leeyihiin wajiyo wareegsan ????
WAAD LUMAY !!!!
Talooyin ku saabsan xirashada suud